वैशाखमा चुनाव हुन्छ, जितेर प्रधानमन्त्री हुने आँट प्रचण्डसँग छ ? : शंकर पोखरल – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारवैशाखमा चुनाव हुन्छ, जितेर प्रधानमन्त्री हुने आँट प्रचण्डसँग छ ? : शंकर पोखरल
वैशाखमा चुनाव हुन्छ, जितेर प्रधानमन्त्री हुने आँट प्रचण्डसँग छ ? : शंकर पोखरल
शुक्रबार दाङको तुलसीपुरमा आयोजित ओली समूहको नेकपाका जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका इञ्चार्जसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गरिरहेका प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षमै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिएको हुँदा निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने आँट देखाउन चुनौति दिएका हुन्।
‘१५ वर्ष महासचिव भएका माधवकुमार नेपाललाई चुनाव हार्दा यो पीडा र छटपटी भएको छ,’ पोखरेलले भने ‘पुष्कमल दाहालको त कुरै नगरौं, यहाँ भएका कतिपय नजन्मिदै उहाँ महासचिव भइसक्नुभएको थियो। ४५ सालमा महामन्त्री भएको अहिले पनि उहाँलाई प्रमुख नेता चाहिएकै छ।’
उनले ३२ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख भए पनि अझैं त्यो लालसा कायमै रहेको बताए। ‘प्रचण्डले अर्कालाई नजिक पर्नै दिनुहुन्न,’ पोखरेलले भने, ‘अलिकति आँखा देखायो भने पार्टीबाट निकाली हाल्नुहुन्छ।’ प्रचण्डलाई अध्यक्ष चाहिएको भए अधिवेशनबाट आएको नेतालाई स्वीकार गर्छु भन्नु प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई के गलत होर भन्दै मुख्य मन्त्रीले प्रश्न गरे। होइन, प्रधानमन्त्री चाहिएकै हो भने चुनावसम्म धैर्यता गर्नुहोस् भन्दा पनि प्रचण्डले नमानेको उनले जिकिर गरे।
‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि हामीले जनादेश प्राप्त गरेका हौं, चुनावसम्म धैर्यता गर्नुहोस्। भर्खरै स्थायी कमिटिले निर्णय गरेको छ। ५ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको छ। त्यति त पर्खिनुहोस् भन्दा पनि प्रचण्डले मान्नुभएन,’ पोखरेलले भने, ‘उहाँलाई त्यो धैर्यता पनि भएन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष पर्खिन नसक्नेका लागि तीन वर्षमै निर्वाचनको घोषणा गरेर बाटो खोलिदिएको उनले तर्क गरे। ‘वैशाखमा चुनाव हुन्छ, जनताको विश्वास जित्ने प्रधानमन्त्री हुने हो,’ पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘ त्यो आँट प्रचण्डसँग छ? छैन, किनकि, आँट भएकाले यस्तो काम गर्दैनन्।’
त्यस अर्थमा उदार को थियो? भन्ने कुरा तथ्यले बताउने उनको तर्क छ। नेपालमा अध्यक्ष भएको मान्छेले यति सजिलै अधिवेशन आयोजना गरौं, म छोड्दिन्छु भनेको ओली नै पहिलो नेता भएको उनले जिकिर गरे।
उनले १५ वर्ष महासचिव भएको माधवकुमार नेपाल र ३२ वर्ष महासचिव भएको प्रचण्डलाई आज पनि त्यहीँ पद चाहिएकाले छटपटी भएको बताए। त्यसअघि उनले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरालाई तानाशाही भन्नु गलत भएको बताएका थिए।
‘यो मुलुकमा लोकतन्त्रका कुनै संगठन संरचना प्रतिवन्धित भएका छन्? छैनन्। संविधान निलम्बित भा’छ? भा छैन,’ उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको भए पनि तीन वर्षमै निर्वाचनमा जाने मात्रै भएको बताए।
लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौंमसत्ता सम्पन्न हुने हुँदा निर्वाचनमा जाँदा लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने उनको कथन छ। ‘संविधानको प्रस्तावनामा यहीँ कुरा लेख्या छ, त्यो सार्वभौम जनताका बीचमा जाने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्दा प्रधानमन्त्री पो लोकतान्त्रिक, जानुहुन्न भन्नेहरू र जनाताबाट डराउनेहरू कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छन्?,’ मुख्य मन्त्रीले प्रश्न गरे।
उनले सबैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको जिकिर गरे। काम गर्ने वातारण नभएपछि फेरि जनतामा जाने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कसरी अलोकतान्त्रिक हुनसक्छ? उनले प्रश्न गरे ।
कतिपय नेताले प्रधानमन्त्रीले कम्युनिष्ट पार्टीको विधि नमानेको आरोप लगाउने गरेको भन्दै त्यो पनि गलत भएको उनको तर्क छ। ‘उहाँहरूको भनाई बहुमतले प्रधानमन्त्री हटाउँदा मान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ,’ पोखरेलले अगाडि भने, ‘विधि के हो भन्ने नयाँ परिभाषा गर्न खोज्या हो र?, संख्यात्मक सिद्धान्तको परिभाषामा उहाँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?’
परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीमा महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्य चुन्ने, केन्द्रीय सदस्यले महासचिव चुन्ने प्रचलन भए पनि आठौं महाधिवेशनबाट महाधिवेशनले नै पदाधिकारी चुन्ने विधि अवलम्बन गरिसकेको उनले बताए।
उनले जसरी महाधिवेशनले तय गरेको नीतिलाई कमिटीले बदल्न मिल्दैन, त्यसैगरी महाधिवेशनले चयन गरेको पदाधिकारीलाई कमिटीले बदल्न नमिल्ने बताए। महाधिवेशनको सर्वोच्चता विपरित निर्णय गर्न र अध्यक्ष हटाउन नमिल्ने उनले तर्क गरे। ‘हामीले त्यहीँ भन्या हो, महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्षलाई केन्द्रीय कमिटीको माध्यमबाट हटाउने षडयन्त्र भएको छ, यो महाधिवेशनको सर्वोच्चता विरूद्धको षडयन्त्र हो,’ पोखरेलले भने।
जसले अधिकार पाएको छ त्यसैलाई मात्रै त्यो बदल्ने अधिकार हुने उनले जिकिर गरे। ‘जसले नेता बनाउँछ, उसैलाई नेता बदल्ने अधिकार हुन्छ। महाधिवेशनले चयन गरेको नेतालाई महाधिवेशनले मात्रै बदल्न मिल्छ,’ त्यहीँ कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भनेको उनले जिकिर गरे।